बाहुबली शासन बन्द गरियोस् : डा. गोविन्द केसी – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
काठमाडौँ, २२ जेठ, २०७६ । नाजायज काम गरे पनि संसदको बहुमत देखाएर त्यसको औचित्य देखाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम सरकारमा परेको डा. गोविन्द केसीले आरोप लगाएका छन् । बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले सर्वशक्तिमान भएको दम्भ र भ्रम पालेको अहिलेको सरकारले लोकतन्त्रको यस्तो मर्मलाई आत्मसात गर्न नसकेको आरोप लगाएका हुन् ।
मिडियाको घाँटी थिच्ने नियतसहित आएको मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता हरण गर्ने नियतसहित आयोगको ऐनमाथि आएको संशोधन प्रस्ताव, विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्तता फितलो बनाएर दलीय चलखेल बढाउने संशोधन प्रस्तावलगायत दण्डहीनता र निरंकुशता–उन्मुख सबै कानुनी प्रावधानहरु तत्काल रोक्न उनले माग गरेका छन् । सरकारका यस्ता गैर–लोकतान्त्रिक तथा निरंकुशता–उन्मुख कदमहरुको विरोध गर्न पनि उनले आब्हान गरेका छन् ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई पुनः संशोधन गर्न पनि माग गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘माफियामुखी प्रावधानहरुसहित जबर्जस्ती संसदबाट पारित गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई हामीसँग भएको सम्झौता बमोजिम संशोधन गर्न पनि माग गर्दर्छौं ।’